तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल माघ २१ गते आइतबार – Etajakhabar
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल माघ २१ गते आइतबार
श्रीसूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, साधारण नाम संवत्सर, शाके १९३९, विक्रसम्वत २०७४ साल माघ २१ गते आइतबार
नेपाल सम्बत ११३८ शिल्लागा,सन् २०१८ फेब्रुअरी ४ तारिक फाल्ुगन कृष्णपक्ष चौथी तिथि अपरान्ह १ वजेर ४ मिनेटसम्म, उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र अपरान्ह २ वजेर ३५ मिनेटसम्म, सुकर्मयोग, बालवकरण, आनन्दादियोग मित्र,सूर्य मकर राशीमा,चन्द्रमा कन्या राशीमा ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ८÷१२ वजेसम्म उद्वेग वेला,८÷१२ वजेदेखि ९÷३४ वजेसम्म चर वेला,९÷३४ देखि १०÷५६ वजेसम्म लाभ वेला,१०÷५६ देखि १२÷१८ वजेसम्म अमृत वेला,१२÷१८ देखि १÷४० वजेसम्म काल वेला,१÷४० देखि ३÷२ वजेसम्म शुभ वेला,३÷२ देखि ४÷२३ वजेसम्म रोग र ४÷२३ वजे देखि सूर्यास्तसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ७÷२३ वजेसम्म शुभ वेला,७÷२३ वजेदेखि ९÷१ वजेसम्म अमृत वेला,९÷१ देखि १०÷४० वजेसम्म चर वेला,१०÷४० देखि १२÷१८ वजेसम्म रोग वेला,१२÷१८ देखि १÷५७ वजेसम्म काल वेला,१÷५७ देखि ३÷३५ वजेसम्म लाभ वेला,३÷३५ वजे देखि ५÷१३ वजेसम्म उद्वेग र ५÷१३ वजे देखि सूर्योदयसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
ॐः–राहुकालः– अपरान्ह ४÷२३ वजेबाट ५÷४५ वजेसम्म रहनेछ, यमघण्टायोगः– मध्यान्ह १२÷१८ वजेबाट अपरान्ह १÷३९ वजेसम्म रहनेछ, दूरमुहूर्तः– अपरान्ह ४÷१७ वजेबाट ५÷१ वजेसम्म रहनेछ, यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः– पूर्वान्ह ११÷५६ वजेबाट मध्यान्ह १२÷४० वजेसम्म रहनेछ, । गुली कालः– अपरान्ह ३÷१ वजेबाट ४÷२३ वजेसम्म रहनेछ । “जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति” ।
भ्रमको अन्त्य हुनेछ । कामलाई निरन्तरता दिनु होला । अरुका कुरा बढि सुन्नु भयो भने काम विग्रिन सक्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुने छन । पारिवारिक समस्या कम हुने छैनन ।
अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्ने छन् । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला । लगनशिलभई गरेका काम सफल हुनेछन् । अलमल गर्दा अवसर फुत्किनेछ । व्यापारबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ ।
शारीरिक शिथिलता बढ्नेछ । घरयासी खर्च बढ्नेछ । व्यापारमा गिरावट आउन सक्छ । आर्थिक कारोवारमा झै झमेला आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । अरुको भर नपर्नु होला ।
समयले साथ दिनेछ । गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । लगनशिलता बढाउनु होला,अलमलमा नपरि काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । भाई बन्धुबाट सहयोग मिल्नेछ ।
आर्थिक कारोवारमा विशेष ध्यान दिनु होला । काममा त्रुटी हुनसक्छ सचेत रहनुुहोला । व्यापार व्यवसायमा सामान्य उतार चढाव आउनेछ । आम्दानी खर्च बरावरै जस्तो हुनेछ ।
अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । काममा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् । आर्थिक कारोवारमा सुधार आउने छ । काम गर्ने जोश जागर बढ्ने छ । व्यापार बढ्नेछ ।
समयले साथ नदिने देखिन्छ,गर्न लागेका काम विग्रिन सक्छन् । नयाँ कार्यारम्भ नगर्नु होला । व्यापारमा लगानी बढाउदा डुब्न सक्छ । अनावस्यक काममा धन खर्च हुनेछ ।
आय आर्जनका दृष्टिले दिन अनुकुल देखिन्छ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । भाग्यले साथ दिदा धेरै काममा सफलता मिल्नेछ । मान्यजनको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ ।
समय सुधारोन्मुख छ । आर्थिक कुरामा सवैलाई विश्वास नगर्नु होला । योजना बनाएर काम गर्नु होला । काममा देखिएका समस्या हटेर जाने छन् । व्यक्तित्व विकास हुनेछ ।
जीवन साथिको सहयोग लिएर काम गर्नु होला । हचुवाका भरमा काम गर्दा अप्ठ्यारो आउन सक्छ । अरुका काममा समय दिदा आफ्ना काम अधुरा रहने छन् । यात्राको योग देखिन्छ ।
दिन प्रतिकुल देखिन्छ । मानसिक तनाव बढ्नेछ । काम गर्ने वातावरण विग्रिनेछ । सम्पन्नोन्मुख काम रोकिने छन् । अहार विहारका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । धोका दिने छन् ।
सामान्यतया दिन अनुकुल देखिन्छ । नयाँ कामको सु–अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । पढाई लेखाईमा भने सोचे जस्तो प्रगति हुने छैन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २०, २०७४ समय: २१:४८:५२
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : तपाईको आजको राशिफल : २०७५ साल आषाढ १० गते आइतबार
साप्ताहिक राशी : तपाईको यो हफ्ता कस्तो छ ? हेर्नुहोस तपाईको भाग्य !
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : तपाईको आजको राशिफल : २०७५ साल आषाढ ९ गते शनिबार
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : तपाईको आजको राशिफल : २०७५ साल आषाढ ८ गते शुक्रवार